DHEGEYSO-Wajigii Labaad ee howlgalka Danab oo Garoowe kasocda. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Wajigii Labaad ee howlgalka Danab oo Garoowe kasocda.
Agoosto 17, 2016 10:31 g 0
Garoowe, Aug 18 2016–Ciidanka nabadgelyada ee gobolka Nugaal gaar ahaan kuwa magaalada Garoowe ayaa saaka magaalada ka bilaabay howlgalo ammaanka lagu xaqiijinayo, kuwaasi oo lagu qabtay askar lasheegay inay hub magaalada ladhexmarayeen iyagoo aan shaqo hayn.
Guddoomiyaha Gobolka Nuugaal Cumar Cabdullaahi Farawayne oo goor dhawayd Radio Daljir waraysi siiyay ayaa faahfaahin kabixiyay ujeedada howlgaladaan, waxaana uu xusay in howlgalkaan uu dabo-socdo howlgallada ka socda Gaalkacyo.
Wariye Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin ayuu khadka taleefanka ugu waramay, ugu horrayna waxaa uu waydiiyay ahmiyada howlgallada.
DHEGEYSO-Duubabka dhaqanka Shabeellaha dhexe oo dowladda dhaliilay.